Zhejiang Falin Appliances Co., Ltd. Ao amin'ny Lishui Wanyang Zhongchuang Town, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province. Miaraka amin'ny velaran'ny trano efa ho 20.000 metatra toradroa, manokana amin'ny famokarana fanamainana tanana mandeha ho azy, fanamainana volo mipetaka amin'ny rindrina, fanasan-tsavony mandeha ho azy, ary fanasan-damba mandeha ho azy. Amin'izao fotoana izao, ny fahafaha-mamokatra isan'andro amin'ny fanamainana volo dia mihoatra ny 3000 sets, ary ny fahafaha-mamokatra isan'andro amin'ny fanamainana tanana dia mihoatra ny 1,000 sets. Manaiky ny baiko OEM sy ODM.
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasa dia nanolo-tena ho amin'ny kalitaon'ny vokatra azo antoka sy ny fanavaozana ara-teknolojia, ambany-tany, ary nahazo laza tsara sy anjara tsena amin'ity sehatra ity. Ny fanaraha-maso henjana dia ataon'ny teknisianinay mandritra ny dingana rehetra amin'ny famokarana. Tao anatin'ny roapolo taona lasa izay, nitombo hatrany ny haavon'ny famokarana, ary nampiana atrikasa lasitra sy atrikasa fanodinana tsindrona mandeha ho azy. Izy io dia nanangana sampan-draharaha matihanina sy R&D, ary manana laboratoara siansa sy teknolojia mba hanamora ny fivoaran'ny vokatra vaovao sy ny fitiliana kalitao, izay nahatonga ny fiakaran'ny kalitao amin'ny teknolojia.
Sanda mivoaka isan-taona
Capacity Line Production
pcs / volana
Ny vokatra marika "DIEBA", "FALIN" ary "OUBEN" an'ny orinasa dia nahazo patanty azo ampiharina maromaro. Miaraka amin'ny fanitarana mitohy ny raharaham-barotra, dia nifandimby nandalo sy nahazo CCC fanamarinana, iraisam-pirenena ISO9001 rafitra kalitao fanamarinana, CE fanamarinana, GCC fanamarinana, EMC sy LVD vokatra fitiliana fanamarinana sy ny ROHS tontolo iainana certification.